La Liga Oo Go’aamiyey Mushaharka Ugu Badan Ee Ay Kooxuhu - Axadle | Wararka Africa
Maamulka Horyaalka La Liga ayaa shaaciyey xaddiga lacagta ay koox waliba mushahar ahaanta u bixin karto xili ciyaareedkan, taas oo lagu salleeyey miisaaniyadda naadi walba.
Xiddiga NIYAD-JABKA Ku Riday Koox Kasta Oo Premier League Ah
Barcelona oo mushaharka ay bixin karto loo ogolaa inuu ugu badnaan noqdo £601 milyan oo Gini ayaa lagu wargeliyey in aanu mushaharkooda xili ciyaareedkan ka badan karin £342 milyan oo Gini, taas oo ka dhigan in ku dhowaad kala-badh ay mushaharkeeda hoos u dhigi doonto.
Real Madrid ayaa nefis ka dareemaysa marka loo eego Barcelona, waxaanay sannadkii hore xaddidaada mushaharkeedu uu ahaa £574 milyan oo Gini oo aanay ka sare marin karin, waxaana hadda laga dhigay £419 milyan oo Gini oo aanay hal centi ku kordhin karin, haddii ay samaysana ay ganaax mutaysan doonto. Laakiin Real Madrid ayaa haysata fursad ay ku bixin karto mushahar ka badan inta barcelona, waxaanay dheer tahay £77 milyan oo Gini.
Sannadkii hore ayay Barcelona dheerayd Real Madrid lacag dhamayd £17 milyan oo Gini, balse hadda waxa saamayn ku yeeshay xanuunka Korona Fayras oo dakhligooda dhulka la galay.
Atletico Madrid ayaa noqotay kooxda saddexaad ee mushahar bixinta ugu badan loo xaddiday, waxayse si aad ah uga hoosaysaa intii sannadkii hore loo qoondeeyey. £344 milyan oo Gini oo hore loogu ogolaa ayaa waxa hadda lagu soo koobay £226 milyan oo kaliya.
Dhamaan kooxaha ayaa ku qasban inay hoos u dhigaan mushaharka ciyaartoydooda, si ay ugu hoggaansamaan jaan-goynta cusub ee mushaharooyinka.
Ciyaaryahanadda Barcelona ayaa mushahar ahaan u qaadan jiray 61 boqolkiiba miisaaniyadda soo gasha kooxda oo ahayd £940 milyan oo Gini ka hor intii aanu xanuunka Korona Fayrasku dunida ku habsanin.
Mushaharka rasmiga ah ee Barcelona ay waqtigan bixiso ayaa dhan £573 milyan oo Gini, waxaana laga doonayaa inay meesha ka saarto £231 milyan oo Gini, taas oo aan la garanayn si ay ku xallin doonto.
Bilihii ugu dambeeyey waxa uu wada-hadallo u socday Barcelona iyo ciyaartoygeeda oo ay ka doonayso inay ku dhowaad kala-badh ka tanaasulaan mushaharkooda, laakiin ciyaaryahannada ayaa iska diiday maadaama ay bishii March illaa dhamaadkii xili ciyaareedka ogolaadeen in 70% mushahar dhimis ay sameeyaan.
War-saxaafadeed ay Barcelona soo saartay Arbacadii hore ayay ku shaacisay inay heshiis ka gaadhi kari waayeen mushahar dhimista ciyaartoyda, waxay se qabsatay waqti kale oo kama-dambays ah oo ay arrintan kusoo afjari doonto.
Lama garanayo sida ay yeeli doonto, balse dhawr arrimood ayay warbaahintu sheegayaan inay u bannaan tahay haddii aanu heshiis dhicin.
In kooxdu ay fasaxdo ciyaartoygeeda waaweyn, sida Lionel Messi oo usbuucii qaata £500,000 Gini oo sannadkii noqota £26 milyan iyo qaar kale oo ah kuwa ugu mushaharka badan si ay dheellitir miisaaniyadeed u samayso oo ay jaangoyntan u dabbakhi karto.
Arrin kale oo miiska saaran ayaa la sheegay inay tahay in kooxdu ay ku dhawaaqi karto, in gebi ahaanba ay musalaftay.
Xiddigaha ugu mushaharka badan Barcelona:
Lionel Messi – £500,000 Toddobaadkii (£26 milyan – Sannadkii )
Antoine Griezmann – £294,000-Toddobaadkii (£15.3 milyan – Sannadkii )
Gerard Pique – £220,000- Toddobaadkii (£11.4 milyan – Sannadkii )
Philippe Coutinho – £180,000-Toddobaadkii (£9.4 milyan – Sannadkii )
Jordi Alba – £170,000-Toddobaadkii (£8.8 milyan – Sannadkii )
Sergio Busquets- £170,000-Toddobaadkii (£8.8 milyan – Sannadkii )
mushaharka ugu badan ee loo ogol yahay koox walba xili ciyaareedkan;
1000’s of refugees flock to Sudan to flee preventing in Tigray